IiHacks zeCSGO 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Thenga eyona CSGO Aimbot, ESP, Wallhack, nokunye okuninzi apha kwiGamepron. Ukuphulukana ayisiyiyo inketho xa usebenzisa iihacks zethu! Ukukopela indlela ekrelekrele kwaye uthenge isitshixo namhlanje.
Sele uthenge i-CSGO Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-CSGO hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu CSGO Hacks
Ii-CSGO Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iiWall Hacks kunye nokunye
Thenga CSGO IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha i-CSGO kwikhathalogu yethu enkulu yeehacks kunye cheats, efumaneka kuphela kwiGamepron!
Khetha amanqaku okulungisa ahambelana neemfuno zakho, nokuba yi-aimbot okanye i-wallhack
Hlawula isitshixo sakho semveliso usebenzisa iindlela zethu zokuhlawula ezikhuselekileyo ze-100, ukugcina abasebenzisi bethu bekhuselekile!
Emva kokuba ufumane isitshixo semveliso, konke okufuneka ukwenze kukukhuphela i-CSGO!
Kutheni i-Gamepron CSGO hacks?
Umgangatho uhlala ekugxilwe kuwo kuphela yiGamepron okoko saqala. Ukuqhagamshela abasebenzisi bethu ngezixhobo zokunqongophala ayisiyondlela ilungileyo yeshishini, kodwa iya kuba nefuthe nakumava omsebenzisi. Abantu bayaqhubeka nokuthembela kwi-Gamepron kwiimfuno zabo zokugenca kuba abanye ababoneleli abanakukwazi ukuqhubeka, kwaye obo bubungqina bokusebenza nzima kwethu! Singatsho ngokuzithemba ukuba i-CSGO hack yethu iya kukunceda uphumelele imidlalo emininzi, kwaye konke okufuneka ukwenze kukuthenga isitshixo semveliso kwaye ukhuphele isixhobo. Abanye abaphuhlisi baya kukunyanzela ukuba ufake ii-cheats ngesandla, kodwa kunqabile ukuba kube njalo apha.
Ukuba umgangatho ayisiyiyo inkxalabo yakho enkulu, sikwanamaxabiso afikelelekayo xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli beprimiyamu. Unokufumana ii-CSGO ezininzi zexabiso eliphantsi kwi-Intanethi, kodwa akukho namnye kubo oza kukunika izibonelelo ezifanayo ne-CSGO. Ezinye zezi cheats zexabiso eliphantsi ze-CSGO zinokukhokelela ekubeni i-akhawunti yakho ivalwe, njengoko ingazikhathazi ngokwenza inkqubo efanelekileyo yokukhusela ukukopela. I-Gamepron ayifumananga ukukopela kwe-CSGO, inika abasebenzisi amandla okuqhekeza nanini na befuna ngaphandle kweziphumo.
I-CSGO sisixhobo esiboniswe ngokupheleleyo esibonisa i-aimbot ye-CSGO ebonakalayo, i-wallhack, kunye ne-radar. Inani leenketho ze-ESP onokukhetha kuzo lodwa lanele ukuba likunike umdla, njengoko ubona ngaphezulu kweentshaba nje ngeendonga! Ukujonga izixhobo eziluncedo, igesi, ukuqhuma, kunye nokuninzi kwezinye iindlela ze-ESP kunokwenzeka xa usebenzisa i-CSGO. Akukho mntu unokuzifihla kwingqumbo yakho xa sisixhobo senziwe sasebenza, kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa nkqu nabaqalayo banokuchuma ngokukhohlisa. I-Radar yenye into eluncedo uninzi lwee-hacks ze-CSGO ezingakwaziyo ukuyenza, ngenxa yoko awusoze ushiywe ungazi ngelixa usilwa-ukuba umntu othile ujonge kwikona, abasebenzisi be-Gamepron baya kuba balungele.
Izikhumba ziyinxalenye ephambili yeCounter-Strike: Iyacaphukisa iHlabathi, kwaye ezinye zazo zinokuxabisa kakhulu (zisebenzisa imali yokwenyani, khumbula!). Kungenxa yoko le nto le nkunkuma igqibelele kwabo banandipha izinto zokuthambisa kuba ungalungisa ulusu lwakho ngaphandle kokuluhlawulela. Isandla, isikhuseli, imela kunye nezinye izono zeGun zinokuhlengahlengiswa kusetyenziswa i-CSGO hack, ke cinga ngayo njengotyalo-mali lwezithambiso ngokunjalo.
Kuninzi okunikwa ngakumbi nge-CSGO, ke owona mbuzo ngowokuba kutheni ungayisebenzisi?
I-CSGO Wall Hack (i-ESP)
Ulwazi lomdlali we-CSGO ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into ye-CSGO ESP eneefilitha
I-CSGO imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Ithambo le-CSGO kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukubuyiswa kwembuyekezo yeCSGO
Ngokufanelekileyo CSGO yimfumba Iimbonakalo
Abachasi bebala kunye nabadlali beqela kuyo yonke imephu kunye nodonga besebenzisa i-CSGO Player ESP! Akukho mntu unokuzifihla kwiliso lakho elibona konke.
Umdlali we-ESP unokuba luncedo ngakumbi xa uvumela uLwazi loMdlali. Chonga amagama abo, imivalo yezempilo, kunye nomgama wabo ngeNkcukacha zoMdlali.
Into ye-ESP iluncedo olukhulu kumdlalo ofana ne-CSGO. Ukuqhuma kwamabala, izixhobo kunye nayo nayiphi na into efakwe kumdlalo usebenzisa i-Item ESP yethu.
Ngaphandle kwe-aimbot ethembekileyo, ukubonwa kusenokubonakala kungenantsingiselo ngamanye amaxesha. Ngombulelo, sineyona CSGO aimbot ilungileyo kwi-intanethi apha kwiGamepron.
Umkhondo we-CSGO Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Umkhondo weBullet usetyenziselwa ukubona apho ukufota kwakho kuhlala khona, kukuvumela ukuba uqinisekise ukubulala ngokungxama. Zilungele iimfazwe zombini ezimfutshane kunye nakumgama omgama!
Ithambo le-CSGO kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Qwalasela i-aimbot yakho ye-CSGO ukuze ihambelane neemfuno zakho zonke, njengoko sinikezela ngokuthandwa kwethambo kunye nokujolisa kwizinto eziphambili onokukhetha kuzo. Yiba mkhulu ngeGamepron!
I-CSGO aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Iitsheki ezibonakalayo ziya kukuvumela ubone ukuba ziphi na iimbumbulu zakho, kwaye ziya kuvala kuphela xa utshaba lunokubulawa (xa zibonakala).
Ukuphinda kubulale abantu abaninzi ngaphambili, kwaye kuya kuqhubeka ukwenza njalo. Ngaphandle kokuba usebenzise i-CSGO hack!
Inqaku lethu lesilumkiso lilungile kubo bobabini abanomdla kunye nabadlali abanamava. Fumana isilumkiso xa iintshaba zijolise kuwe nge-CSGO!
I-CSGO imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Ukonakala kokuwa akusengomcimbi xa udlala i-CSGO. Yiwa emazulwini ngaphandle kwenkathalo kwihlabathi ngelixa usebenzisa i-CSGO!
Yiba ngoyena mdlali ubalaseleyo we-CSGO kwihlabathi
Ukuba ngumdlali ongcono kwiCounter-Strike: Ulwaphulo-mthetho lwehlabathi lunokwenziwa ngeeyure zokuziqhelanisa nokukhathazeka kunye nokufunda iimephu. Kunzima ukuba ngumdlali olungileyo ngaphandle koncedo, kodwa i-Gamepron inokukuguqula ube kwinqanaba lobungcali kwimizuzu nje embalwa! Onke amanqaku afunekayo ukuthomalalisa abachasi bakho akwi-CSGO, ke sukuphoswa kukungqinwa kwe # CSGO okukhoyo kwintengiso!
IiHacks ze-CSGO ezidumileyo kunye nokukhohlisa
I-CSGO ESP kunye neWallhack
Ubungqina benyawo, ukonakaliswa okuphezulu kunye nokuHamba okuPhakathi
Ezinye iiHacks ze-CSGO kunye nokukhohlisa
I-Counter-Strike: I-Global Offful kufuneka ibe ngomnye wabadubuli babantu abadumileyo abakhe bakhutshwa, kwaye eso sisivumelwano somdlali ozinikeleyo. Abantu bebedlala i-Counter-Strike njenge-franchise ngaphezulu kweshumi ngoku, kwaye oko kuthetha ukuba bazakubakhona abadlali abaninzi abalungileyo-xa udibana neqela labo kwaye ungazi ukuba wenzeni, ungahlala themba kwi-CSGO. Isixhobo asithathi ikhefu kwaye asinazintsuku zingasebenziyo, siza kwenza lonke ixesha olivulayo.
I-Gamepron ngumboneleli we- # 1 wee-CSGO ezikwi-Intanethi, kwaye xa ufuna ezona hacks zidumileyo ze-CSGO kwaye ukopela kwi-intanethi, ligama kuphela onokulithemba. Kudala sijongana nomzi mveliso okumgangatho ophezulu wokuqhekeza, kwaye sihlala sikulungele ukwamkela abasebenzisi abatsha kusapho lweGamepron. Yiba ngumdlali we-CSGO ongcono namhlanje ngokufumana ukufikelela kwi-CSGO.
I-CSGO inempawu ezinamandla kakhulu ezineempawu ezingakumbi kunangaphambili. Umlilo oZenzekelayo uza kuzitshisa izixhobo zakho nanini na xa umntu ekwisigaba sokubulala, ngelixa iSmooth Aiming iya kugcina izinto zikhangeleka zendalo. I-Autowall iya kuhlala iskena kwiindawo eziqinileyo ekujoliswe kuzo, kwaye unokwenza ukuba i-Sticky Mode inyanzelise ii-crosshairs zakho ukuba "zincamathele" kwiintshaba. Ukujonga umsi kuya kujonga igesi / umsi weentshaba ezingabonakaliyo, ngelixa i-RCS inokuthi yenziwe ukuba isuse ukubuyela umva kunye nokubuyela umva.
Ukuchaneka kuya kuba yinto emiselweyo kuninzi lweemilo zakho, kwaye abadlali abanezakhono eziphezulu baya kumdlalo wokukhomba ngokuchanekileyo. Xa ufuna ukugcina kunye nabadlali ababonakala betha yonke into, uyakufuna i-CSGO aimbot yethu! Imowudi yokuThula ikwasebenza ngokukuko xa uzama ukugcina umsulwa kuba isigebenga esicacileyo asisiyonto ifanelekileyo. Yenza nantoni na ongathanda ukuba uyiNgqinele ukubetha: Ukhubekisa ilizwe lonke ngokukhohlisa kwe-CSGO.
I-ESP kunye neWallhacks zizinto ekufuneka zenziwe nakuphi na ukukopela okuthembekileyo. Bavumela umsebenzisi ukuba abone izinto abanye abangazenziyo, kwaye oko kukubeka ngendlela elula. Zininzi iindlela ezahlukeneyo ze-ESP (Ukuqonda okungakumbi kokuqonda) ngaphakathi kwe-CSGO kangangokuba abantu bothuka ekuqaleni! Sebenzisa inqaku lomdlali kwi-ESP ukubona ukuba ngubani oza ngendlela yakho, kunye nokuba bangakanani na impilo abasele nayo (kunye nomgama wabo). Amathambo omdlali anokubonwa kwiindawo eziqinileyo, ke abasebenzisi beGamepron bahlala begcina isandla esiphakamileyo. Nokuba ungazama kangakanani na ukuphembelela, ukusebenzisa i-CSGO yindlela eqinisekileyo yokuphumelela.
Ngaphandle kwe-wallhack ethembekileyo, awuyi kwenza owona mgudu ungcono. Ezinye ii-CSGO cheats ziya kuswela i-wallhack, okanye zinike abasebenzisi enye engalinganiyo netyala. Ungazikhathazi ngababoneleli abancinci kwaye ufumane izinto ezilungileyo kwangoko! Ukufumana ukufikelela kwi-CSGO ESP kunye ne-wallhack namhlanje.
Iimbumbulu zakho ziya kupakisha inqindi, zishiya abachasi bezibuza ukuba kwenzeka njani ukuba ubabethe kangaka. Inqaku lethu loMonakalo oMkhulu lifumaneka kuphela kwi-CSGO, kwaye lelinye eliya kujolisa kuphela kwezona ndawo zibulalayo zomzimba wotshaba. Indawo yonyawo isetyenziselwa ukulandelela iintshaba zakho phantsi kwaye uzinike iimbumbulu zesidlo sasemini, nto leyo engumsebenzi onzima- ngeFootprint, uya kubona apho baya khona ngokwemikhondo yomhlaba. Nokuba ulandela umntu omnye okanye iqela liphela, ungathembela kwiFointprint ukuze ugcine ulwazi. Umgama wethu wokuqhekeza unokudityaniswa nabanye ababini ukwenza isixhobo esifanelekileyo "sokulalela", ekulula ukuba sesona sicwangciso sisebenzayo kwiCounter-Strike: Kuyacaphukisa kwiHlabathi liphela.
Iimpumelelo azisayi kuba mbalwa kwaye ziya kuba kude phakathi xa unayo i-CSGO enikwe amandla, ngokungathi abasebenzisi bethu ngandlel 'ithile bafuna ukuphulukana nesixhobo.
Ukuba ucinga ukuba yiyo yonke into ekufuneka inikwe yi-CSGO, uyaphazama ngokulusizi. Inani leempawu ezinikezelwe kubasebenzisi bethu nge-CSGO alikho kuphela, kodwa zonke ziluncedo ngokwazo. I-Radar iya kukunika isishwankathelo semephu yonke, ikuvumela ukuba uqaphele apho zikhona iintshaba (ngaphambi kokulandela umkhondo nokuziphelisa ngokufanelekileyo). Inqanaba lokujonga linokusetyenziselwa ukubona ukuba yeyiphi inqanaba labadlali abathile, kukunika ukhetho lokuphepha abadlali abakumgangatho ophezulu (hayi oko kuya kufuneka!). Isibali seBhombu siya kukwazisa ukuba lingakanani ixesha elishiyekileyo ngaphambi kokuqhushumba, kwaye ungasebenzisa iRadius ukubonisa uluhlu olusondeleyo lomhlaseli ekujoliswe kuye.
Ungawutshintsha umbala ngayo nayiphi na into kwesi sixhobo. Nokuba ziimodeli zomdlali ozibona ngodonga, okanye ii-2DBoxes ezichaza iintshaba, unokuhlengahlengisa yonke into kwi-CSGO. Lungiselela amava akho ngeGamepron!
IiHacks ze-CSGO imibuzo
Kutheni ii-CSGO Hacks zethu
I-Gamepron yaziwa ngokubonelela abantu ngee-hacks ezikhoyo, zonke ezifumaneka apha kuphela. Ayisiyiyo kuphela i-hacks yethu ekhethekileyo, kodwa ayifumaneki ngokupheleleyo! Akunyanzelekanga ukuba uzibuze ukuba uyavalwa na ngelixa usebenzisa i-CSGO, kuba usezandleni ezilungileyo xa ukhetha ukuqhekeza ngeGamepron. Sukusebenzisa i-CSGO yexabiso eliphantsi, awufanelekanga umngcipheko!
Kutheni i-CSGO Aimbot yethu
I-CSGO Aimbot yethu ingaqwalaselwa njengeyona inempumelelo kwezakha zakhutshwa (hayi i-Counter-Strike kuphela, sithetha ngawo nawuphi na umdlalo!). Inani leempawu onokukhetha kuzo linokubonakala lixakekile kubantu abafikayo, kodwa yinkqubo elula kakhulu ukuseta esi sixhobo. Yenza ngokwezifiso useto lwakho ukusuka entloko ukuya kuzwaneni kunye ne-CSGO! Akukho namnye umnikezeli we-hack onokukukhonza ngendlela esenza ngayo apha.
Kutheni i-CSGO ESP yethu
I-CSGO ESP elungileyo inokuwuguqula umjelo wemfazwe kwiCounter-Strike, njengoko ungasayi kuphinda uhlaselwe ngokuhlaselwa kwakhona. Ungazibona iintshaba ukusuka kumgama weemayile ngokusebenzisa indawo eqinileyo, kunye nezinto ezahlukeneyo ze-Item ESP -lwazi luphambili kulo mdlalo, kwaye i-CSGO ESP yethu iya kukubonelela ngalo lonke ulwazi onokulufuna.
Kutheni i-CSGO yethu yeWall Hack
Sebenzisa i-CSGO wallhack yethu ukuba uqonde ngokwenene ukuba "ufana nothixo" kumdlalo wevidiyo omalunga noko. Ungasebenzisa i-wallhacks ukubona ii-campers kunye nabanye abadlali abanengxaki ngaphambi kokuba ungene kuluhlu lomlilo, oko kuthetha ukuba unokucwangcisa kwangaphambili! Abayi kuba nofifi lokuba uphi, kwaye ukufumana ukwehla kubachasi bakho akusayi kuba ngumsebenzi onzima.
Kutheni i-CSGO NoRecoil yethu
Ukuphinda ulawuleke kungalawulwa ngokuqonda izixhobo zakho, kodwa ikhona enye indlela onokuyilahla ngayo. Sebenzisa inqaku lethu leNoRecoil kuya kususa naluphi na uhlobo lokubuyela umva okunxulunyaniswa nokudubula isixhobo sakho, kukuvumela ukuba ube nenqanaba eliphezulu lokuchaneka ngaphandle kwemfuneko yempepha. Ngelixa kulungile ukusebenzisa izakhono zakho ngalo lonke ixesha, unokuhlala uguqula i-aimbot kwakhona!
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo ze-CSGO?
Khuphela iihacks ezilungileyo ngokuthenga isitshixo semveliso kuthi kwiGamepron. Nje ukuba uthenge isitshixo semveliso, ungayisebenzisa ukukhuphela i-CSGO hack-inqanaba lakho lokufikelela liya kugqitywa ngokubhekisele kwinto ethengiweyo. Akunyanzelekanga ukuba ufake nantoni na nokuba yeyiphi, konke omele ukwenze kukukhuphela i-hack kwaye uyiqalise ngaphambi komdlalo!
Kutheni ii-CSGO zakho zibiza kakhulu kunezinye
Amaxabiso ethu awela ngokuhambelana nenqanaba lokuzikhethela elinikezelwa apha kwiGamepron. Sinenombolo ekhethekileyo yeendawo ezikhoyo ezikhoyo kubasebenzisi bethu, oko kuthetha ukuba abanye abantu abayi kukwazi ukufikelela kwisixhobo ngamaxesha onke. Ukuba awufumani ukufikelela ekukhohliseni ngaphambi kokuba kuthengiswe, kuya kufuneka ulinde! Zonke azibonakali nazo.
Sisebenzisa imida yexesha ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi bethu banikwa elona lungelo libalaseleyo. Ukuba ufuna ukukhangela ixesha elide kunesiqhelo, unokukhetha ukwenza njalo! Awunyanzelekanga ukuba uzibophelele kangangeenyanga ngexesha ukuba awufuni, njengoko sinika usuku olu-1, i-1-veki, kunye nezitshixo zemveliso yenyanga enye ye-CSGO. Uza kumisela inqanaba lakho lokufikelela, hayi thina.
Kuhle CSGO yimfumba Iimbonakalo